Wasiirka amniga Puntland oo Boosaaso ku noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu dibada kusoo qaatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeWasiirka amniga Puntland oo Boosaaso ku noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu dibada kusoo qaatay
June 11, 2016 Abdi Omar Bile Home, Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib hal bil oo uu daaweyn caafimaad u joogay dalka Jabuuti.
Wasiir Qarjab ayaa dib ugu noqday xarunta ganacsiga Puntland, Boosaaso, maanta oo Sabti ah kadib markuu daaweyn caafimaad kusoo dhamaystay magaalada Jabuuti ee caasimada wadanka Jabuuti.
Wasiirka oo saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso wuxuu sheegay in caafimaadkiisa uu aad u wanaagsanyahay uuna ku noqon doono dhawaan shaqo maal-meedkiisa.
5-tii bisha May, wasiirka amniga ayaa ku dhaawacmay is-rasaasayn dhexmartay ilaalada saraakiisha ciidamada booliska oo ka dhacday magaalada Boosaaso.
June 9, 2016 Madaxweynaha Puntland oo wacad ku maray inuu laynayo maxaabiista al-Shabaab haddii aysan maleeshiyada joojin dilka shacabka